Rastrabani.com | बैंकसँग ऋण दिने पैसा छैन - Rastrabani.com बैंकसँग ऋण दिने पैसा छैन - Rastrabani.com
बैंकसँग ऋण दिने पैसा छैन
काठमाडौं, १३ पुस । मुलुकभरका वाणिज्य बैंकहरुमा ऋण दिने पैसा ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र छ । भर्खरै सर्वोच्च अदालथले एनसेलको पुरानो कम्पनी टोलिया सोनेरालाई आफ्नो नाफा विदेश लैजाने अनुमति दिएको छ ।
स्रोतहरुले दिएको जानकारीअनुसार नेपाली बैंकहरुमा रहेको यो रकम ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । अर्कोतिर यहि महिना उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम कर तिर्दैछन् ।
केही कम्पनीहरु चाँडै सेयर निष्कासनको तयारिमा छन् । आगामी दिनमा आउने यी प्रमुख घटनाले वाणिज्य बैंकहरुमा तरलताको अवस्था कस्तो होला ? बैंकहरु सर्वसाधारण र उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा हुन्छन् वा हुँदैनन् ? दुई वर्षअगाडिको जस्तै बैंकहरुमा पैसा नभएर समस्या त आउँदैन ? राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरु र बैंकरहरु विकराल अवस्था नआए पनि समस्या ठूलै हुनसक्ने बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अधिकांश बैंकहरु पर्याप्त रकम भएका सार्वजनिक संस्थाहरुमा पैसा माग्न गएको घटनाले आगामी दिन त्यत्ति सहज नहुने संकेत गरेको खबर नागरिक दैनिकमा छ ।